ကမ်းခြေပေါ်ဆမ် | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! ကမ်းခြေပေါ်ဆမ် | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
အဆိုပါသဲသောင်ပြင်ပေါ်ဆမ်အောင်မြင်စွာဆတ် slot ကလျှပ်စစ်ဆမ်နှင့်အတူဆက်လက်၌တည်ရှိ၏. ဒါဟာကာရစ်ဘီယံ၌အဆင်းလှသောကမ်းခြေသူ့မိသားစုနှင့်အတူအားလပ်ရက်အပေါ်သူသည်အတူတူပင်ဇာတ်ကောင်ဤအချိန်အောက်ပါအတိုင်း. Join him in the fun in this Mobile Slot Game and win up to 2,275 အဆသင့်ရဲ့အလောင်းအစား.
တက်လာမယ့်ကတည်းက 2012, ဆတ်စတူဒီယိုတစ်ခုထင်ရှားတဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်း developer အဖြစ်သူ့ဟာသူဖော်ထုတ်အောင်မြင်ခဲ့သည်. ဤသည်ကို Mobile ပေါက်ဂိမ်းကုမ္ပဏီကတီထွင်အခြားပျော်စရာအွန်လိုင်း slot ကဖြစ်ပါတယ်.
ဤသည်ကို Mobile ပေါက်ဂိမ်းစုစုပေါင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး 243 သင်ဤ slot ကအနိုင်ရနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများ. ငါး reels တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပွင့်လင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်လှပသောကမ်းခြေတစ်ဦးအမြင်ပေးပါ. ကြည်လင်တဲ့ကောင်းကင်ပြာနှင့်အတူသန့်ရှင်းတဲ့ကမ်းခြေ, စွန်ပလွံပင်ကဒီမှာရှိကမ်းခြေ dotting, ပြီးချစ်စရာမိသားစုမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြည့်စွက်. အဆိုပါအနိမ့်ပေးဆောင်ခြင်းသင်္ကေတများစိတ်ကိုအတွင်းပင်လယ်ဆောင်ပုဒ်ကိုစောင့်ရှောက်နေကြသည်နှင့်နီယွန်အရောင်ဖြစ်သောအကြမ်းဖျင်း မှလွဲ. လင်းမြင်သာဖော်ပြပါရှိသည်. အဆိုပါပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးကိုသင်္ကေတဟာ trolls များ၏မိသားစုဝင်များကကိုယ်စားပြုနေကြသည်. ဆမ်, သူ့ဇနီးစန်ဒရာ, မိမိသမီးမဂ္ဂီ, နှင့်သူ၏အစ်ကို Ted အားလုံးအထူး features တွေအတူပါလာ.
အခမဲ့လှည့်ဖျား- ထိုး 3, 4, သို့မဟုတ်5ခေါင်းလောင်းကြဲဖြန့်သင်္ကေတများနှင့်ခံယူ 5, 10, သို့မဟုတ် 15 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. သင်လှည့်လည်စဉ်က hit တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုဆောင်းခေါင်းလောင်းအိုင်ကွန်သင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအခမဲ့လှည့်ဖျားပေးရန်လိမ့်မယ်.
လျှပ်စစ်ရယူထားသော- အခမဲ့လှည့်ခြင်းများစဉ်အတွင်းလေယာဉ်ဆင်းသက်မဆိုမိသားစုဝင်များအထူး features တွေပေးသနား.3ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါရပ်နေစဉ်အတွင်းလေယာဉ်ဆင်းသက်ပိုပြီးဆမ် icon တွေကိုသင်စေးကပ်လွင်ပြင်ရလိမ့်မယ်.3ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါရပ်နေစဉ်အတွင်းလေယာဉ်ဆင်းသက်ပိုပြီးစန်ဒရာ icon တွေကိုအကြံအထိ 10x မြှောက်ကိန်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆုချပါလိမ့်မယ်.3အဆိုပါအင်္ဂါရပ်နေစဉ်အတွင်းလေယာဉ်ဆင်းသက်မဂ္ဂီ icon များအားလုံးနိမ့်တန်ဖိုးကို icon များ reels ကနေကွယ်ပျောက်စေမည်.3အဆိုပါအင်္ဂါရပ်နေစဉ်အတွင်းလေယာဉ်ဆင်းသက် Ted icon တွေကိုသင် 2x သို့မဟုတ် 3x ၏စေးကပ်တိုးပွားစေရဦးမည်.
သဲသောင်ပြင်အမှတ်တရများ Respin- သငျသညျပုံမှန်ဂိမ်းထဲမှာအတူတူပင်တန်းပေါ်မှာရှိသမျှမိသားစုဝင်များတစ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းများအခါတိုင်း, ဒီ feature အစပျိုးနေသည်. သငျသညျဤအရာအလုံးစုံမိသားစုဝင်များစေးကပ်ကိုတောသို့လှည့်တဲ့ respin ချီးမြှင့်ကြသည်.
ဒါဟာကိုယ်နှိုက်အတွက်အရာတစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီး pack မှာ. ဒါဟာအကြီးအပုံရိပ်ယောင်ရှိပါတယ်, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်ပုဒ်, နှင့်ဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်များဝန်. အဆိုပါမိုဘိုင်းပေါက်ဂိမ်းလုပ်ဆောင်ချက်အများကြီးကိုထောက်ပံ့ပေး, အထူးသဖြင့်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအင်္ဂါရပ်နေစဉ်အတွင်း.